Golaha Ammaanka ee QM ayaa sheegay in loo waayay wax cadeymo ah dacwad ka dhan aheyd… – Hagaag.com
Golaha Ammaanka ee QM ayaa sheegay in loo waayay wax cadeymo ah dacwad ka dhan aheyd…
Golaha Ammaanka ee Qarramada Midoobey ayaa kulankoodii xalay ka sheeegay in wax cadeymo ah loo waayay dacwad ka dhan aheyd Taliyaha Ciidanka Booliiska Gobolka Banaadir General Sadiq John oo lagu soo eedeeyay in uu xiriir la leeyahay Al-Shabaab.
Philippe Kridelka oo ah guddoomiyaha guddiga cunaqabateynta ee Qarramada Midoobey ayaa golaha ku wargaliyay in lagu waayay Sadiq John eedeymihii loo soo jeediyay wixii hadda ka danbeeyana uu soo dhamaaday baaritaankii arrintaa ku saabsanaa.
“Waxaan rabaa in aan golaha ku wargaliyo eedeymihii ay soo gudbiyeen guddiga cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ee ka dhanka ahaa Sadiq John loo waayay wax cadeymo ah ayuu yiri Philippe Kridelka oo la hadlayay Golaha Ammaanka.
Dowladda Soomaaliya oo kaashaneysa qarreenno heer caalami ah ayaa wadday dacwado ka dhan ah eedeynta kooxda cunaqabateynta hubka oo ay dowladda Soomaaliya ku eedeysay in marar badan oo hore warbixino aan sax aheyn ka gudbiso xaalada Soomaaliya iyo saraakiisha dowladda intaba.
Sadiq John ayaa ah sarkaal saameyn badan ku dhax leh hay’addaha Nabad-galyada Soomaaliya, isaga oo horay u soo noqday sarkaal sare oo ka tirsan NISA ka hor inta aan loo dalacsiin Taliyaha Ciidanka Booliiska Gobolka Banaadir.